Home » Lahatsoratra farany farany » Karaiba » Mandefa ny tambajotran-tserasera ny fizahantany any Karaiba
Vaovao Mafana Barbados • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
CTO dia mandefa ny tambajotra fizahan-tany ho an'ny fiarahamonina
Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO) dia nandefa ny Community Community Network Network (CCTN) hanome sehatra hanohanana ny fitohizan'ny CBT any Karaiba. Ny manampahefana misahana ny fampandrosoana ny fizahantany any amin'ny faritr'i Karaiba dia manana loharanom-pahalalana hanovozana rehefa mampivelatra ny programa fizahan-tany fizahan-tany (CBT).
Hanome sehatra hanohanana ny fampandrosoana ny fizahantany fizahan-tany any amin'ny faritra ity tambajotra ity.
Hanamora ny fifanakalozana fomba fanao tsara indrindra eo amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny CTO sy ireo mpiara-miombon'antoka fampandrosoana ny fizahan-tany ny tamba-jotra.
Izy io koa dia hanampy amin'ny famaritana ny filàna fananganana fahaiza-manao ary koa ny fanamby sy ny fahafaha-manao fampandrosoana CBT.
"Ny fizahantany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina dia manararaotra mampifandray ny elanelam-piarahamonina sy toekarena eo amin'ny fiarahamonina eo an-toerana, mamela ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina lalana mankany amin'ny fivelomana maharitra, ary fantsom-pandraisana anjara mavitrika sy fanomezana hery ny olona eo an-toerana amin'ny fizahantany," hoy i Amanda Charles, manam-pahaizana manokana momba ny fizahantany maharitra ny CTO. “Ity tambajotra ity dia manome làlana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny CTO hizara fahalalana, loharano ary fomba fanao tsara indrindra hanatsarana ny traikefa fizahan-tany sy ny fiatraikany ara-toekarena.”
Anisan'ny asan'ny CCTN ny fampiroboroboana sy ny fanohanana ny paikadim-pampandrosoana isam-paritra ao amin'ny CBT, manome fidirana ary manome tolo-kevitra ny hetsika sy ny hetsika mba hanatsarana ny fahitana sy ny lanjan'ny CBT ho vokatra fizahan-tany isam-paritra ary ny fifanakalozana traikefa amin'ny fandraisana andraikitra nasionaly sy isam-paritra.